Sida loo kiciyo ilaalinta kor u qaadka ah ee Google Chrome ee Android | Androidsis
Sida loo kiciyo ilaalinta Google Chrome ee kor loo qaaday ee Android
Bog furaha Google Chrome wuxuu si gaar ah u hagaajiyay qaybta amniga si looga dhigo mid xoogan marka loo eego hanjabaadaha badan ee ka muuqda internetka. Cusboonaysiinta kala duwan ee biraawsarku waxay ka dhigayaan inay saxaan waxyaabo badan, laakiin kuma filna inay na ilaaliso innaba.
Sida caadiga ah dalabku wuxuu la yimaadaa difaac caadi ah, mid ka mid ah qodobbada la tixgelinayo haddii aad ugu isticmaasho qalabkaaga Android marar aad u badan. Waxa ugu fiican ee la sameeyo ayaa ah inaad dhaqaajiso midka la xoojiyay si aad naftaada uga ilaaliso phishing, mid ka mid ah farsamooyinka ay inta badan adeegsadaan weeraryahannada si ay u xadaan macluumaadka isticmaalaha.
Ilaalinta kor loo qaaday ayaa ku habboon xaaladaha oo dhan adoo firfircoon, maadaama dhibic xun ay tahay inay u diri doonto xogta hagista Google. Haddii aad doorato inaad uga tagto iyada oo aan la ilaalin, waxaad la kulmi doontaa wax walba, ha noqoto bogagga internetka ee khiyaanada ah, phishing, malware iyo hanjabaado kale oo ka jira shabakadaha shabakadaha.
1 Sida loo sahlo ka baaraandegidda aaminka ah ee Google Chrome on Android
2 Ilaalinta caadiga ah ee Google Chrome
3 Ilaalinta kor loo qaaday
Sida loo sahlo ka baaraandegidda aaminka ah ee Google Chrome on Android
Google iyada oo loo marayo boggeeda rasmiga ah waxay kugula talineysaa ilaalinta ama hagaajinta ilaalinta, midkoodna wax ka qaban doona wax kasta oo khatar ah oo waxyeelo leh Tallaabooyin yar ayaa ku filnaan doona qaabeyntiisa Mana aha sida ay u adag tahay sida ay umuuqato inay ka wareegeyso ilaalinta caadiga ah ilaa ilaalinta la xoojiyay.
Si aad u dhaqaajiso ilaalinta kor u qaadista ee Google Chrome ee Android waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Ku bilow barnaamijka Google Chrome qalabkaaga Android, midkood taleefankaaga ama kaniinigaaga
Hadda midigta sare, dhagsii saddexda qodob oo dhagsii Settings
Markaad gudaha gasho, raadso «Asturnaanta iyo amniga», dhagsii oo ka soo gal
Hadda dooro ilaalinta doorbideysa, heerka ama midka hagaagsan, farqiga u dhexeeya waa weyn yahay waxaana kuu soo bandhigeynaa dhammaan faahfaahinta labada si aad u dooran karto mid
Ilaalinta caadiga ah ee Google Chrome
Ilaalinta caadiga ahi waxay ogaataa oo kaaga digtaa dhacdooyinka halista ah markay dhacaan.
Ka hubi URL-yada ku keydsan Chrome-ka liistada liistada degellada ammaan ma aha. Haddii degelku isku dayo inuu xado lambarkaaga sirta ah ama aad soo degsato feylal xun, Chrome waxay u diri kartaa URL-yada, iyo sidoo kale guntimaha waxyaabaha ku jira bogga, Browsing Safe.
Caawi hagaajinta amniga webka: U dir Google URL-yada boggaga aad booqatay, macluumaadka nidaamka xadidan, iyo bogga waxyaabaha ku jira si ay uga caawiyaan helitaanka hanjabaado cusub iyo ilaalinta dadka isticmaala webka. Doorashadan waxaa dhaqaajin kara isticmaalaha.
Ogeysii haddii ereyada sirta ah lagu soo bandhigo jabinta amniga xogta, shaqadan waxaa lagu dhaqaajin doonaa adoo galaya koontadaada Google. Waa la fasaxay, laakiin waxaa lagu talinayaa in la kiciyo.
Ilaalinta kor loo qaaday
Saadaalinayaa oo uu kaaga digayaa dhacdooyinka halista ah markay dhacaan
Waxay kaa ilaalinaysaa Chrome waxaana loo isticmaali karaa in lagu wanaajiyo amnigaaga barnaamijyada kale ee Google markii aad soo gasho
Hagaaji amnigaaga iyo kan qof kasta oo shabakadda ku jira
Kuu wargalinayaa haddii furahaaga sirta ah lagu soo bandhigo jebinta amniga xogta
U dir URL-yada si aad u hubiso. Waxay sidoo kale soo dirtaa muunad yar oo bogag ah, soo degsasho, waxqabad kordhin, iyo macluumaad nidaam si looga caawiyo ogaanshaha hanjabaadaha cusub. Markaad gasho, kuxir cinwaankan koontadaada Google si kumeelgaar ah si aad iskaga ilaaliso barnaamijyada Google
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo kiciyo ilaalinta Google Chrome ee kor loo qaaday ee Android
Galaxy S21 FE ayaa jidka kusii jira, laakiin wali waqti ayey ku qaadan doontaa inuu suuqa gaaro